विचार / सम्पादकीय Archives - उज्यालो पोस्ट::उज्यालो पोस्ट
लुम्बिनी – विश्वकै प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थल र पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने परिकल्पना गर्दै २०३५ सालमा जापानी वास्तुविद् प्रा. केन्जो टांगेले लुम्बिनी विकास गुरुयोजना बनाए । उनले तयार पारेको गुरुयोजनाले निश्चित क्षेत्रमा सीमित संरचना...
साया किरण । आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्वभर मनाइँदैछ । मे १ तारिखको दिन विश्वका ८० भन्दा बढी राष्ट्रमा आधिकारिक रूपमा मे दिवस मनाइन्छ ।आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र...
उज्यालो पोष्ट, सैनामैना । रमेश गैरे बच्चुलाल केवट आफैंमा एउटा गर्विलो नाम हो । उनका गतिविधि र क्रियाकलापलाई देख्दा लाग्छ, उनी केवल सामाजकै निम्ति समर्पित एक होनहार युवा हुन् । वि.स.२०३६ साल पौष २९ गतेका दिन बुवा...
कार्यकर्ताले बोक्नुपर्ने झण्डा गैँडालाई किन बोकाइयो ?
यो वर्ष धेरै नै कुम्भ मेलाहरूको संयोग परेको छ । हाम्रो जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता मेलाको चर्चा नगरी बस्न सकिएन । बनारसको हिन्दु सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आयोजना गरेको विश्व खाद्य प्रणाली सम्मेलन,...